Nabiyadii Christ-Tamaya waxay muujineysaa asalka sumcadda iyo hantida DJ Arafat - teles relay
Nabiga Christ-Tamaya wuxuu muujinayaa asalka sumcadda iyo nasiibka DJ Arafat
Nebiyadii Christ-Tamaya, oo sheegata inay tahay dhalashada Ciise Masiix, waxay sameysay waxoogaa naxdin leh oo ku saabsan madaxa weyn ee Yorogang, dabayaaqadii Dj Arafat, iyo kaniisada cusub Claire Bahi daabacaad lagu sameeyay boggeeda Facebook.
Christ-Tamaya wuxuu muujiyey astaamo waaweyn oo ku saabsan Ange Didier Houon oo loo yaqaan Dj Arafat, kaasoo dhintey August 12, 2019, kadib shil mooto naxdin leh. Farriin ay soo dhigtay boggeeda Facebook, ayay Nabigu ku soo warramay in Beerus Sama ay hodan ku noqotay oo caan ku noqotay dhaqamada sixirka.
“DJ Arafat wuxuu ku leeyahay sumcadiisa iyo maalkiisa shaydaan shaydaan. Xitaa waxaa loo soo bandhigay inuu la seexdo hooyadiis. Laakiin wuxuu doortay inuusan wax wanaagsan ku qaban lacagtiisa. Tani waa sababta uusan guri u iibsan iyo inuu weli kireysanayo… ”, ayay tiri.
Farriinta Jacaylka ee Barack Obama ee Dhalashada 57aad ...
Phil Spector, soo saare muusig caan ah iyo gacan ku dhiigle, wuxuu ku dhintey da'da 81 -…
Phil Spector: soo saare caan ah oo Mareykan ah ayaa ku dhintay xabsiga
Kadib ku dar: Karma ayaa laga yareynayaa wajigiisa dhexe ee jiritaankiisa iyo noloshiisa dambe maxaa yeelay wuxuu ku sharfay Buddha mid ka mid ah heesihiisa. Ficilkan ugu sarreeya, wuxuu ku jiraa nuurka weligiis ah oo ay ilaalinayaan malaa'igaha ”.
Christ-Tamaya ma uusan sii joogin, kaliya halkaas. Waxay sidoo kale weerartay Claire Bahi oo dhabarka u jeedisay Couper-shifter maalmo uun kadib markii la aasay Daishikan.
Kalsooni: nin ayaa ku dhaha "saaxiibaday waxay rabtaa inay galmo igu disho"
“Waxaa jiray mid ka baqayay inuu sidoo kale goor hore dhinto. Waxay ku deg degtay inay qabato khamiiskii Ciise Masiix. Sidaa darteed "Shaydaan, waan ku helay"… Gacaliye, ma aadan sheegin wax walba markii aad u socotay qirashada dadweynaha. Jinku waligiis wax ma siiyo bilaash ”, ayay tiri.
Cunnooyinka ugu Hadhsan Mahadcelinta Cunnada Sandwich - New York Times
Hadday ku filnaan lahayd jacaylka Celine Dion (daboolida Natalia Kogan) - Video
Farriinta Jacaylka ee Barack Obama U Diraya sannad-guurada 57aad ee xaaskiisa ...
Phil Spector, soo saare muusig caan ah iyo gacan ku dhiigle, wuxuu ku dhintey da'da 81 - qof
Meghan iyo Harry waxay ka baqayaan inay 'waarayn badan' ka waayaan boqoradda Megxit